Akhriso - Illaa 10 Xildhibaan ayaa saxiixay soo jeedin ku saabsan heshiisyada lala galay dalalka shisheeye - Damqo
Akhriso – Illaa 10 Xildhibaan ayaa saxiixay soo jeedin ku saabsan heshiisyada lala galay dalalka shisheeye
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa mooshin ka keenay heshiisyada iyo is afgaradyada lala galay dalal shisheeye.
Illaa 10 Xildhibaan ayaa saxiixay soo jeedin ku saabsan heshiisyada lala galay dalalka shisheeye, intii uu xilka hayay Madaxweyne Farmaajo, iyadoo laga codsaday Guddoonka inuu furo dooda ku saabsan heshiisyadaas.
Tiro ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa Maanta mooshin ka keenay heshiisyadii iyo is afgaradyada dowladda Federaalka la gashay dalal shisheeye.
Qoraal ay ku saxiixan yihiin 10 ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa loo gudbiyay
Guddoonka Golaha,waxaana ay ka dalbadeen inuu furo dooda ku saabsan heshiisyada ay dowladda hadda jirta la gashay dalalka Shisheeye.
Qoraalka Xildhibaanada soo saareen ayaa waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa in aan Shacabka Soomaaliyeed lala wadaagin heshiiskii Saddex Geesoodka ahaa ee dalalka Soomaaliya Itoobiya iyo Ereteriya.
Aqriso Warqada ay Soosaareen Xildhibaanada Barlamaanka Soomaaliya
Previous Wasiir Bayle ayaa carabaabay xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka kuwaas oo uu ku edeeyay in ay isaga lacag waydiisteen si ayan uga horimaan howlaha Wasaaradda
Next Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ayaa goor dhow ansixiyay Hindise sharciyeedka xuquuqda Siyaasiyiinta dowladda
Hadalka maanta ka soo yeeray dowlada Kenya oo ahaa mid ka soo baxay shirkii Golaha Wasiirada ee uu maanta shir-gudoomiyay Madaxweyne Uhuru Kenyatta yaa ahaa mid loogu digaayo dadka danaha ka leh dalka Kenya
Boqolaal Maxaabiis kuna xiran Xabsiga Sacuudiga oo la sii dayn doono
Sawirro:-Maxaa looga hadlay kulanka Golaha Wasiiradda cuusb Puntland?
Inter-Rapid Vienna 4-0: Spalletti ayaa u gudbay wareega labaad,
Dawo – II Corriere dello Sport ayaa ku adkaystay in Ronaldo aanu isagu sabab u ahayn guuldaradii Juventus ka soo gaadhay Atletico laakiin waxay siiyeen qiimayn 5/10
Ciyaaraha damqo TV R-Dadweeynaha Rayiga Dadweeynaha Uncategorized Wararka Maanta wardoom warka damqo